Muqdisho oo dad lagu ‘qabqabtay hawlgal’ socda | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Muqdisho oo dad lagu ‘qabqabtay hawlgal’ socda
Muqdisho oo dad lagu ‘qabqabtay hawlgal’ socda
Daraasiin dad ah ayaa lagu qabqabtay hawlgal ballaadhan oo ay waddajir uga fuliyeen gudaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ciidamadda dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. Inta badan dadka ay ciidamaddu qabteen ayaa lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanka Al-shabaab ama ugu yaraan ay xiriir dhow la lee yihiin madaxda sare ee xarakadaasi.
Guddoomiyaha degmada Hodan, Cabdulqaadir Cali Kullane oo warbaahinta kula hadlay warshaddii hore ee caanaha, halkaasoo ahayd bartilmaameedka kowbaad ee hawlgalka wuxuu sheegay in ciidamadda isbaheysigu ay gacan weyn ka siiyeen maammulkiisa soo qabashada 25 qof kaddib markii la helay macluumaad ku saabsan rag aad loo baadigoobayo oo soo galay xaafadaha qaarkood ee degmadaasi.
Hawlgalkaasi ayaa lagu soo beegay, xilli dhawaan askar lagu dilay qarax miino oo lala bartilmaameedsaday gaari dagaal oo ay saarnaayeen ciidamadda dawladda dhexe ee Soomaaliya, kaasoo ka dhacay agaggaarka warshaddii hore ee caanaha.
Previous articleGabiley oo mudaharaadayaal lagu dhaawacay
Next articleDaaci oo dawladdu dammaanad ku sii daysay